A Baleka zeyure — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kubo bonke ubomi bam, Ndakhe ndathi ndigqithile amaxesha xa bendikhe ngokwenene eyabangela ukuba ubale. Xa esikolweni aphakamileyo Ndandifuna nje ukuba Buff yanele ukuze amantombazana (ndisilele). Kwiinyanga ngaphambi komtshato wam ndandizama ukusebenza kwam umzimba beach lwasemva. Kule mihla, Ndizama nje ukuqinisekisa Ndihlala elidlulileyo kumashumi zam. ezithethelelayo zam ziye zatshintsha kule minyaka, kodwa oko ayikatshintshi yindlela akaguquguquki ezo nezizathu ezixhasayo.
Mhlawumbi sele ngokwendalo ozimisele ukuba asebenze ngaphandle-amayeyeye ukuba nabahlobo bam ngeposi pics and videos of irejimeni yabo noqeqesho ngosuku ngalunye. Kodwa ukuba ufana nam, izizathu zakho, ndikuhambise ngathi itakane kwitrampolini. Kuthekani ukuba iziphumo kwi umsebenzi wakho ngaphandle lwathabatha ngonaphakade, nangona? Ngaba ubuya ufune?
Ngexesha Winter Olympics nyanga iphelileyo ndibe bubuso njengoko ndabaphaphelayo imibane bobsledders ekhawulezayo kunye snowboarders highflying. Ndandithanda egqwesa lwabo lwezemidlalo, kodwa Ndada gqitha xa ndicinga malunga noqeqesho siyaqeqeshwa kufuneka ukuba athathwe ukuba kukho.
Ekupheleni kwesiganeko ngasinye xa iimbaleki noloyiso zema podiums ophumeleleyo ngayo, bencumile ngobuso babo iimbasa uphumle phezu ezifubeni, ukuba bevuna iinzuzo uqeqesho. Kodwa ngokutsho kweBhayibhile, kukho uhlobo ophakamileyo uqeqesho-kungekhona ngenxa yokuba uqeqesho emzimbeni yanto, kodwa ngenxa yokuba umda.
Ukuba ukhe wakha wazibuza ukuba uThixo ucinga workouts zakho, nantsi impendulo: Ucinga ukuba abe luncedo, kodwa kungaphelelanga, ixabiso. Ngoko xa usebenzisa, ukwenza ihle, kwaye iphakamisa iintsimbi, kuphumla esazi ukuba yinto elungileyo ukwenza. Ukugcina umzimba wakho usemzimbeni omhle incomeka-nokuba sisilumko-kodwa izakuba kuphela ukufumana ndiyakuva.
Le nto umpostile uPawulos wathi kuTimoti:
"Kodwa akunanto yakwenza iintsomi ntlonelo abafazazana. kunokuba, Ziqhelise sinokuhlonela, ngenxa yoqeqesho Umzimba inzuzo eliqingqiweyo, ke kona ukuhlonela uThixo ntshe indlela yonke, kuba kunedinga lobomi bakalokunje, nobobo buza kubakho." (1 Timoti 4:7-8)
Singenza ezishwankathela iingcinga uPawulos ekusebenzeni ngolu hlobo: uqeqesho yomzimba entle, kodwa uqeqesho ngokomoya ngcono. Kwaye ngenxa yokuba amandla omzimba okwethutyana, xa kona ukuhlonela uThixo obungunaphakade. Xa uPawulos athetha ngalo "uqeqesho ukuhlonela" Ndicinga ukuba kuthetha ukwenza izinto ezikwenza womelele ngokomoya. Oku kuthetha ukuba wenza imisebenzi ezikwenza uThixo ngaphezu. Mhlawumbi ephakamisa Bible wethu ngaphantsi enqwenelekayo kune kokuphakamisa ubunzima, kodwa betyeshela ithetha thina siphoswe ngaphezu kwimpilo entle.
Ngonaphakade ilunge ngaphezu Moment
Sonke siyazi ukuba xa kukho into ithatha ixesha elide nto inqweneleka. Akukho namnye uthenga imoto esazi iyakuba Yodilizwa kwinyanga elandelayo. Singathanda thenga into ithatha ixesha, kuba siza kufumana ngaphezulu kwe investment. Kodwa ukuba kunjalo sisheke ibalwe nezigqibo ezimalunga iimoto, wobeka phi ibalwe sifanele imiphefumlo yethu?
kangakanani ucinga ngonaphakade yakho? Inyaniso, simele sicinge ngayo ngaphezu kwethu. Akukho mbuzo ukuba sonke uya kuphila ngonaphakade; umbuzo kukuba ngonaphakade kuya kuba njani. Ngoko simele senze utyalo ngoku, sisazi ukuba iziphumo alunasiphelo.
Oku nefuthe koko kugxininisa imihla ngemihla. Sports zilungile, kodwa awuka yonke. akho namandla ndifumane ukuba ungene e kholeji, kodwa oko kuya kukunceda kungena eZulwini. Mabakulumkele kakuhle umzimba wakho, kodwa into enzima ukunyamekela. Ucocekile na umphefumlo wakho?
UThixo kusenza ukuba sibe "yezihlunu yokomoya" xa akabandulula isono ubambe nentolongo kaYesu. Kwaye ngoko uthumela ukuba lokuzilolonga. Uye wabababala usinike ilizwi lakhe, abantu bakhe, nkqu indlebe yakhe. Ngoko ke masiphinde sifunde, ubudlelwane, kuthandaza. Iimbaleki uziqeqeshe kuba befuna ukuba bazilungiselele umdlalo okanye umdlalo phambi kwabo. Bafuna ukuba bakwazi ukukhuphisana kwinqanaba eliphezulu.
Sonke siya kujongana iimvavanyo zokomoya, izilingo, asokole ngemihla. Ngaba nikulungele? Saza ayisebenzi iimbaleki kwaye akusayi kusebenza kumaKristu. Ukufunda iBhayibhile Kunyaka ophelileyo akwanelanga ukuba akuxhase kulo nyaka. Siza kwenza kube kweli imarathoni ngobabalo lukaThixo, kodwa usilungiselela wohlanga umthambo lethu lokomoya.
Yinto luncedo kum ukuba ukukhumbula ukuba ngoxa inzuzo uqeqesho ngokwasemzimbeni aphelela, iinzuzo uqeqesho ngokomoya unlimited. Ngezo ntsuku xa musa ndiziva ngathi ethandaza okanye ukufunda iLizwi likaThixo, Mna ndizixelele ukuba inzuzo nto encinane okanye okwethutyana. Kuya kuphela kundinceda kwiveki ezayo, uya kundinceda kubomi elilandelayo. Nantso zonke izizathu kufuneka.
uTheodora • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 10:40 mna • impendulo
nalento kangakanana…!!!Enkosi!!& UThixo akysikelele….enkosi ngokuvumela inkosi akusebenzise.
Mat Smethurst • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 10:42 mna • impendulo
Enkosi eli ilizwi elilungileyo, uhambo.
Daniel DryIce Reyes • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 10:44 mna • impendulo
Uhambo enkosi lo. Kuba veki idlulileyo bendikhe besoyika ukufa. Andazi kutheni kodwa ndiya kwenza. Kwakufuneka ngokwenene ukuba Wokhumbula ukuba ezulwini yeyona nto ibhetele kwezakha yaye lo mhlaba uya ngandivi nto.
vizlyfe • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 10:47 mna • impendulo
Oku kuhle kakhulu! Enkosi ifam! Wena irhamncwa!
GregBrown • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 11:06 mna • impendulo
Enkosi lendawana ukhuthazo! Kulula ukuba abanye bethu ukuba phithi ukutya okunempilo kwaye obonisa. Kodwa ngaba uchitha ixesha elininzi uceba izidlo lakho ize umthambo, ngaphezu ngamaxesha ngomthandazo ukufundisisa iLizwi? Kulula ukuba izinto zakho ubeko, nkqu endle nomnqophiso.
Iintsikelelo kuKristu bonke!
Mat • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 1:18 pm • impendulo
Ndiyavuma. Ukomelela ngokomoya / umthambo yeyona nto ibaluleke kakhulu ngaphezu kukuzigcina / umthambo, kodwa mna ndikholelwa ukuba omabini kunokwenziwa ngexesha elinye kwakunye. Ndiyazi kukho umgca phakathi ndisebenza ngokwakho kwaye ndisebenza kuba uThixo, kodwa kukho umahluko (yikholwe okanye hayi). Ndisebenza kuba uThixo, ngokwasemzimbeni, iquka isiqalelo ngokomoya. Njengokuba, xa unayo neqabane ukuzilolonga, ukuba uthethe ezimbini ngamathuba xa ukuzilolonga kunye. Cinga ukuba, xa uthetha ezimbini, akukho malunga pump, izihlunu zakho, etc. kunokuba, xa uthetha, ukuthetha entliziyweni yakho, kwaye sinobudlelane omnye nomnye kuKristu. Rhuqa emzimbeni kusenokuba umdla ofanayo kwabo ejimini, kodwa xa udibanisa zokomoya, ukukhulisa mthathe ibe kumgangatho sangotshe (kunene apho ebekumele ukuba), ekusasazeni uthando lukaKristu. Kolose 3:17
Casey • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 1:34 pm • impendulo
Oku imangalisa indlela uthetha INkosi ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Mna ngokuzamana yayicinga “Ndiya kufuneka abale ukuba namhlanje” kodwa uziva ngathi andithanga kule ndawo ngokuphindaphindiweyo elifuna uzive kokuba bachitha ixesha ukuba akukho into eqhubekayo ebomini bam. Ukufunda le blog yaba bekhunjuzwa kuThixo ukuba>Mna xa ndicinga kuye kwaye ukuqeqesha ngokomoya, Ndiziva ngcono kakhulu kwaye Ndiyathemba ukuba akukho njengenkcitha. Ndicinga ukuba uhlale usempilweni kubalulekile kodwa ndiyazi ukuba bembe ilizwi lakhe yaye befuna kuye ixabisa kakuhle wesibini yonke yobomi bethu. Ixesha kunye uThixo akazange linxuwa. Enkosi ekuthobeleni oko uKristu wanibizayo ukuba ukwabelana. Ebendiyifuna ngayo le. God bless Wena Trip nosapho lwakho!
Trip Lee • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 4:28 pm • impendulo
uyibuza, ngamnye wesibini enye ubalulekile. Ndiyavuya ukuba bebenokukhuthazwa!
JB • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 2:00 pm • impendulo
iimpahla bro Good
adonai • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 3:18 pm • impendulo
hey uhambo, ummm thats byitself ngokunzulu zikhuthazayo
UDonnell • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 3:43 pm • impendulo
Umntu lo nto eyoyikekayo, Ndiyakuthanda ngoko uya kuba. Ndiyakuthanda ukufunda iimfundiso zakho umculo wakho ngoku incwadi yakho “Ubomi Good”.
Trip Lee • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 4:26 pm • impendulo
Ndiyavuya ukuba bebenokukhuthazwa. Kwaye ndiyathemba ncwadi kunokuba luncedo ukuba ngeendlela ezininzi!
MrsRondo • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 4:25 pm • impendulo
Oku kuhle. Izinto ezimbini ndiyathemba ukuba singenise kulo nyaka ukanti mna bazamazamana lowo kubaluleke ngakumbi omnye. Enkosi Uhambo, kwiiwebhsayithi yakho ngexesha ziye eyoyikekayo kakhulu, kwaye basoloko balathe nam ndibuyele Superstar.
Tee-boy • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 5:16 pm • impendulo
Bro le nto kufuneka. Bendikhe nzima nokulwa kunye nomoya ukuze isibini lokugqibela iintsuku. Nje ulibele ukuba sithandaze, ukufunda bible yam, kwaye uye ecaweni. Le vuka umnxeba. Ukususela ngoku mna yayiguquke umntu okuKristu. Ndiya ndacinga uThixo uya n kuphinda phulaphula kum, ngenxa yobomi bam abangahloneli. UYesu wafa emnqamlezweni efela mna ndiyazi ndisoloko bevumelekile ebusweni bakhe waza yena nje bathembekileyo ukuba andixolele ezonweni zam.
Bro Ndiyambulela uThixo kuba ubomi bakho kwaye umsebenzi omkhulu yena Akwenzayo ngawe. UThixo akusikelele sokukholelwa imisebenzi yakhe.
Hlala wabasikelela umzalwana wam.
Keinya • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 5:31 pm • impendulo
Khombisa zikhatha-! Enkosi! = o)
RobJohnson • EyoKwindla 11, 2014 ngexesha 5:47 pm • impendulo
wabasikelela nolushukunyiswa oku. Enkosi Uhambo!
kaLiam • EyoKwindla 12, 2014 ngexesha 12:00 mna • impendulo
Atripe izithuba zakho kusoloko afike ngexesha ogqibeleleyo. Gcina kukuyeka uThixo ukusebenza ngawe umhlobo wam
uYoshuwa Galvin • EyoKwindla 12, 2014 ngexesha 2:18 mna • impendulo
kwakufuneka ngokuqinisekileyo lo bhuti. Enkosi ukhuthazo.
Mistry • EyoKwindla 12, 2014 ngexesha 3:28 mna • impendulo
deeeeep struff Uhambo, hayi into esidla ngo kuthetha ngayo. Ndiyacela, ukugcina izithuba bakho ukuza.
Vicmonyi • EyoKwindla 12, 2014 ngexesha 1:06 pm • impendulo
tirsit • EyoKwindla 13, 2014 ngexesha 12:26 pm • impendulo
Obu ubomi bam ukuba mna ngokwam sivumelane ukuba, God y Uhambo!!
udongwe • EyoKwindla 13, 2014 ngexesha 12:35 pm • impendulo
Renee • EyoKwindla 13, 2014 ngexesha 9:54 pm • impendulo
Kanye umzalwana ngexesha. Enkosi! inkosi ikusikelele!
Sophie • EyoKwindla 19, 2014 ngexesha 5:14 pm • impendulo
Amen. Enkosi thumela lo myalezo. Sonke sidinga ukuba. Makabongwe uThixo.
E_Jay • EyoKwindla 24, 2014 ngexesha 2:09 mna • impendulo
UThixo akusikelele oku.. Mna ndithandaza kuwe ukufumana nenkuthazo kunye nokhuthazo ngexesha yur intswelo… Amen
nia • EyoKwindla 24, 2014 ngexesha 7:13 pm • impendulo
Izinto ezintle. ivesi Great.
uSolomon • EyoKwindla 26, 2014 ngexesha 6:55 pm • impendulo
Enkosi ukuthembeka kwakho INkosi uhambo. Ndicinga ukuba kufuneka ubhale incwadi yesibini.
LoganLong • UTshazimpuzi 1, 2014 ngexesha 11:45 mna • impendulo
Ndicinga ukuba oku efanelekileyo kakhulu kwinkcubeko yethu namhlanje. Lingakanani ixesha ubona abantu umthambo iiyure? uhambo, Ndisebenza le YMCA kwaye ndibona abantu mini ngemihla ngenxa ubuncinane kwiyure esebenza ngaphandle, kodwa ngokubanzi ngaphezu koko. Kwaye ufumana wena ucinga, kukho mhlawumbi into eninzi amaKristu ukuba kungena Y wam (Sicela inkulu e Indiana), ngoko bangaphi kubo achitha 1-2 iiyure ngosuku ukuzibandakanya ngokwabo kumsebenzi ngokomoya? Oku efanelekileyo kum ngoba ikhwelo phandle kwakufuneka ukubuyela kwimilo emzimbeni nangokomoya. Enkosi umzalwana.
Marjorie • UTshazimpuzi 2, 2014 ngexesha 12:20 mna • impendulo
Amen, nibulela ngenxa isikhumbuzo!
Oritsegbemi • UTshazimpuzi 17, 2014 ngexesha 6:39 mna • impendulo
Eli lizwi ngexesha! inkosi ikusikelele!
josh • UTshazimpuzi 26, 2014 ngexesha 4:38 mna • impendulo
Eli lizwi-for-a-ngexesha. Xa inkcubeko kukho uxinzelelo ezininzi zentlalo ukukhangeleka kakuhle kunye guys ukuba ukulungele 'Buff', singafumana bambeke kakhulu kwi koko ucinga ukuba sifanele sibe, ziziphi ngabanye kufuneka zikhangeleke.
Esithi uThixo ucinga ukuba workouts salinganisela ixabiso sisiphako kwi, kuthelekiswa lwanaphakade lichitha noThixo.
Oku kundikhumbuza ibali uDavide wokuthanjiswa kwakhe ngukumkani uSamuweli 1 Samuel 16). UThixo athi kwivesi 7, “Abantu khangela imbonakalo yangaphandle, kodwa ke uYehova ukhangela intliziyo.”
MannyRuiz • UCanzibe 17, 2014 ngexesha 2:05 mna • impendulo
Uhambo kukhuthaza ngokwenene! Nantoni ufumana kum sisondele kuThixo kuzisa ngokwenene kum ulonwabo kwaye undomeleze! Ngoko enkosi umntu. Ndiyazithanda kuwe. Ndiza ndihlala ndithandaza kuwe :)
kaLiam • Isilimela 21, 2014 ngexesha 10:27 mna • impendulo
Uhambo Ndimkhulu kungena nilufezekisa, kodwa kufuneka ndizikhumbuza ukufunda esi sithuba kanye ngeliny'ixesha. Kundenza ndizive ingqalelo ngezinto ngokwenene
Brian • EyeKhala 4, 2014 ngexesha 9:33 mna • impendulo
Yhu njenge lwebloga naye ndiyamthanda okubhalwe kule. Mna Buff ukuzilolonga kodwa uyeza kulula amaxesha ukufumana ixesha ukuchola iLizwi yam yemihla ngemihla. Mna ke ndiyamangaliswa ukuba kutheni na kume kwizilingo njengokuba kufuneka. njengesikhumbuzo kuhle. Enkosi Uhambo
Gnocchi • EyeKhala 21, 2014 ngexesha 6:22 pm • impendulo
Oku kuya khuthaza ngokwenene kwaye iye into Sekudlule engqondweni yam. Mna ukufunda ngemihla yam iBhayibhile, inyaniso, Ndikwazi ukuya ngenxa 2 okanye 3 iintsuku ngaphandle ukunxibelelana neLizwi likaThixo…kodwa ngoku ndiyazi ukuba ndiza bakuphikayo ngokwam iingenelo obungunaphakade. Oko kuthetha lukhulu kum ukuba oko ukufunda namhlanje ziya kukunceda veki izayo okanye kwinyanga ezayo. Andikwazi kuthembela endakwenzayo kunyaka ophelileyo, okanye kwiveki yokugqibela…Mna ndisebenza ngonaphakade yam!!
Ukuhlonela uThixo ixabiso ZONKE IZINTO ngokubamba isithembiso zombini lobomi bakalokunje, nobobo buza kubakho!
Enkosi Trip Lee, zokuqeshisa umsebenzi uThixo ngawe…Imma sifunda iLizwi ngaphezulu! :)
uDebhora • EyeNkanga 20, 2014 ngexesha 12:26 pm • impendulo
Uthando esi sithuba! Ndiyamthanda umthambo & Ndiyamthanda uThixo, kodwa ndiyazi ukuba Fitness yam yokomoya ephambili yam.
Ngosa • UTshazimpuzi 14, 2015 ngexesha 6:33 pm • impendulo
ukuba ibisoyikeka umyalezo Uhambo, Bendisoloko ndizibuza ukuba ingaba nilufezekisa engalunganga okanye okanye ezingeyomfuneko. uhlalutyo icacisa emoyeni lowo. thanx, ukugcina BRAGING Bro!!